OMG: Ndakabaiwa uye handizive zvaivemo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » OMG: Ndakabaiwa uye handizive zvaivemo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Health News • vanhu • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Chii chiri mu ibuprofen kana mamwe mishonga?
Chii chaiva mujekiseni rangu?
COVID-19 iri kudzoka nesimba rakazara. Vanhu vazhinji vanopera muICU kana kufa havana kubaiwa.
Ichi chinyorwa chakatsaurirwa kune vese avo vanofunga NOT INI.
Ndakabaiwa uye kwete, handizive zvirimo - kwete mujekiseni iri kana mune yandakawana ndichiri mudiki, kana muBig Mac kana imbwa dzinopisa.
Iniwo handizive kuti chii chiri mubuprofen kana mimwe mishonga, inongopora marwadzo angu.
Handizive zvese zvinosanganisa sipo yangu, shampoo, kana deodorant.
Handizive mhedzisiro yenguva refu yekushandiswa kwenharembozha.
Handizivi kuti chikafu chandaidya murestaurant chainge chagadzirwa nemaoko akachena here.
Handizivi kuti hembe dzangu, maketeni, zvinwiwa zvemasports hazvina kunaka here.
Pane zvinhu zvakawanda zvandisingazive uye zvandisingafe ndakaziva.
Asi pane chinhu chimwe chandinoziva:
Hupenyu hupfupi, hupfupi, uye ndichiri kuda kuita chimwe chinhu kunze kwekungo "vharirwa" mumba mangu.
Ndichiri kuda kumbundira vanhu ndisingatyi.
Ndichiri mwana uye ndakura, ndakabaiwa nhomba yeporiyo nezvimwe zvirwere zvakawanda. Vabereki vangu neni taivimba nesainzi uye hatina kumbobvira ndatambura kana kutapurira chero hosha yandakabaiwa.
Pese pandinotyaira, ndinoisa hupenyu hwangu kuzviuru zvevasingazivi uye ndinovimba kuti vacharamba vari parutivi rwavo.
Zvakashanda hupenyu hwangu hwese kusvika zvino!
Pasina kuvimba, hapana hupenyu hunokodzera kurarama uye hapana rudo!
Handina jekiseni rekufadza hurumende.
*Handidi kufa neCovid-19.
*Handidi kuparadzira Covid-19
* Ndinoda kumbundira vadiwa vangu
*Ndichiri kuzviyedza kuti ndisaendesa Covid
* Ndinoda kurarama hupenyu hwangu.
* Ndinoda kuita Covid-19 ndangariro dzekare.
* Ndinoda kutidzivirira.
* Ndinoda kudzivirira avo vasingagoni, kureva vana vedu vadiki.
Ini ndinobaiwa nekuti kune zvimwe zvirwere zvakakomba zvingada kurapwa muwadhi yevanorwara zvakanyanya, senge
tsaona, heart attack, cancer
Ini ndakabaiwa nekuti ndinoda kufamba uye kuongorora nyika!
Kubva kwatiri tese pa eTurboNews uye World Tourism Network!
Ndokumbira ubaye nhomba!